Anaheilt, Scotland, United Kingdom
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguGrant And Laura
Xa iyi-57 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Singathanda ukukwamkela eCraigrowan Croft apho songeze khona le ndlu yesitayile se-pod siyibize ngokuba yiGobha.
Kukuhamba nje imizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile zalapha ekhaya kunye nokuhamba imizuzu eli-10 ukuya kwiindawo zokutyela ezi-3 ezithandekayo kunye ne-pub epholileyo.
IGobha (igama elithi gaelic elithetha uBlacksmith) imi phezu nje kwamabhodlo endlu endala yomkhandi weentsimbi.
Ngaphakathi kwepod kukho ibhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nesitya sokuhlambela, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nendawo yokuhlala ene-smart tv. I-pod ine-broadband ekhawuleza kakhulu. Ngaphandle sinendawo ehonjisiweyo eyindawo entle yokuphumla xa kuphuma ilanga!
Ukuba unabantwana abancinci sinoluhlu lwezixhobo ezikhoyo zokukugcina indawo exabisekileyo yokupakisha emotweni! Ezi ziquka i-buggy kunye nebhedi yokuhamba.
Usapho lwethu luyazithanda izilwanyana, indalo kunye nezinto ezintle zangaphandle. Sithathe ubunini becroft ngo-2018 ngeenjongo zokutshintsha indlela yethu yokuphila; ukuvumela usapho lwethu ukuba lube namava endalo ngokugqibeleleyo kwindawo entle yaseStrontian.
Siye sasebenza nzima ukusukela ngoko ukuyibuyisela kwi-croft esebenzayo kwaye saqala uhambo lwethu lwemfuyo ngamatakane amathathu anobuhlobo kakhulu, esiye sanandipha ukuncancisa ibhotile okusonwabisa kakhulu! Uthando lwethu ngezilwanyana lwakhula ukusuka apho kwaye ngoku sineenkukhu ezingaphezu kwama-20, amadada ama-6, iiponi ezi-3 kunye neehagu ezi-3.
Ayiyomfuyo kuphela ebesixakeke yiyo, siphinde sasebenza nakwigadi yethu yasekhitshini, nto leyo ebesichumisa ngayo kule minyaka idlulileyo.
Icroft yenziwe ngeehektare ezilishumi elinesihlanu, ezintlanu kuzo zityalwe umxube wemithi yemveli. Eminye ininzi yenziwe ngamadlelo arhabaxa, imithi ethile evuthiweyo, iintlobo ngeentlobo zeentyatyambo zasendle, ubulembu nobulembu kwaye kukho ukutyelelwa rhoqo okuvela kuluhlu lwezilwanyana zasendle eziquka amaxhama abomvu neentaka ezidla inyama.
Kukho iimbono ezimangalisayo phezu kweenduli ezijikelezileyo, intlambo kunye ne-loch emva kokunyuka okukhuthazayo kwi-croft! Ukusuka kwi-croft unokufikelela kuhambo oluthandekayo lwamaplanga lwasekhaya (Phemies Walk), onombono omangalisayo ngaphandle kweLoch Sunart.
I-wifi ekhawulezayo – i-57 Mbps
4.77 · Izimvo eziyi-26
Umbuki zindwendwe ngu- Grant And Laura
UGrant And Laura yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Anaheilt